Bogga ugu weyn Geoarbitrage: Maxay ka dhigan tahay? Sida Loo Jabiyo Goobtaada 2022
Weligaa ma ku fikirtay inaad ka tagto shaqadaada Mareykanka oo aad u guurto Australia si aad nolosha u bilowdo sababtoo ah waxaad dareentaa in qiimaha ku noolaanshaha waddanka dambe uu jaban yahay?
Si kale uga fikir.
Miyaad weligaa ka tagtay magaalo/dal oo aad u tagtay magaalo/waddan kale si aad ugu raaxaysato noloshooda qiimaha jaban intaad shaqadaada meel fog ka haysanayso tii hore?
Taasi waxay inoo keenaysaa su’aasha ah, waa maxay u -gar -qaadasho juquraafi?
Waa maxay Geoarbitrage?
Miyuu Geoarbitrage Qof walba u yahay?
Sida Loo Sameeyo Ugu Fiican Geoarbitrage
#2 Qiimaha nolosha
#3 Hab -nololeedka Guud
Talaabooyinka Lagu Qaado Garqaadka Juqraafi
#1 Dooro goob
#2 Samee xisaabinta maaliyadeed
#3 Soo gal oo baadho
Waxaan kugula talinaynaa
Ereyga gar -qaadid juquraafi macnaheedu waa ka faa'iideysiga farqiga u dhexeeya qiimaha nolosha ee u dhexeeya goobaha juqraafiyeed ee kala duwan.
Waxaa loola jeedaa guuritaan si looga faa'iidaysto kharashyada hoose ee magaalo/dal. Fikradda waxaa dhiirrigeliyay rabitaanka ah in lacag badan la sameeyo.
Si kale haddii loo dhigo, waxay ku lug leedahay u guuridda meel leh qiimo jaban ee nolosha iyada oo la hayo isla ama heer dakhli oo sarreeya.
Geoarbitrage wuxuu si dhakhso leh u keenayaa xorriyadda maaliyadeed iyo madaxbannaanida. Kaydinta lacagta adiga oo u guuraya meel leh qiimo jaban oo maciishadu waxay ka dhigan tahay in aad fasaxdo waqti badan oo loo baahan yahay si aad lacag u hesho.
Waxa kale oo lagama maarmaan ah inaad ogaato inaadan u guurin si joogto ah. Ka guuritaanka magaalo ama waddan gaar ah oo aad u guurto mid kale, waqtigan xaadirka ah, waxay kaydin kartaa kaydkaaga waxayna saamayn weyn ku yeelan kartaa dhaqaalahaaga iyo noloshaada guud ahaan.
Marka tan hore loo sameeyo xirfaddaada, isku -darka kaydintaas dheeraadka ah waxay kuu keeni doontaa xorriyad dheeraad ah noloshaada dambe.
Marka, haddii aad waligaa nuujisay ujeedka laga yaabo inaad Mareykanka ugu noolaato New Zealand halkaas oo aad ka dareento kharashka donuts guud ahaan wuu ka jaban yahay, waxaa laga yaabaa inaad tan aragto ka hor intaadan qaadan go'aanka kama dambaysta ah.
Waa inaad iska hubisaa: Barnaamijyada Xalinta Khilaafaadka Tafaariiqda: Sidee bay u Qiyaasaysaa Iibintayda
Waxaa jira astaamo, xaalado, ama astaamo u suurta gelinaya in qofku si sahlan u guuro halka ay jiraan duruufo aan fiirin kaliya inay iibsadaan fikradda.
XIDHIIDHKA: Meelaha ugu Fiican ee aad isaga fariisan karto California 2022
Tusaale ahaan, haddii aad aad ugu qanacsan tahay shaqadaada 9-ilaa-5 oo runtii aadan rabin inaad qaadato wax khatar ah oo aad isku daydo waxyaabo cusub ama xitaa aad ka shaqeyso wixii ka baxsan jadwalkaaga caadiga ah si aad u noqoto qof iskii u shaqeysta, waxaa laga yaabaa inaadan lahayn sabab ama ku boorri inaad ka tagto shaqada iskaba daaye guuritaan.
Waxa kale oo jira xaalado rabitaanka iyo rabitaanka bixitaanka ay jiri karaan laakiin xaqiiqda ah inaad leedahay xiriir adag ama qoys oo aadan awoodin inaad raacdo ayaa caddaynaysa cillad.
Hadda, waa kan, si ay u jirto ujeedo, waa inay jirtaa rabitaan diyaar u ah in lagu taageero heer gaar ah oo xoog iyo allabari ah. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad ka tagto qoyskaaga, jir ahaan, haddii aadan awoodin inaad kaxaysato. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa qirasho shaqsiyeed iyo dabeecad sax ah.
Kahor intaadan qaadan go'aanka ah inaad ka tagto magaalo/waddan oo aad aaddo meel aad dareento inaad ka heli doonto dhaqaale badan, waxaa jira waxyaabo waaweyn oo la tixgeliyo;
Dakhligu waa arrin aad muhiim u ah in la tixgeliyo marka laga fikirayo garqaadidda juqraafi. Waa inaad fahan xoog leh ka haysataa qorshayaasha maaliyadeed oo waa inaad awood u leedahay inaad ogaato oo aad aragto faa'iidooyinka muuqda ee goobta cusub ee loogu talo galay xagga maaliyadda. Waa kuwan dhowr su'aalood oo aad u baahan tahay inaad ka jawaabto…
Ma shaqooyinkii ayaad bedeshaa?
Miyaad ka shaqaysaa meel fog?
Ma bilaabi doontaa ganacsi cusub?
Ma noolaan kartaa dakhliga ku haboon?
Ma leedahay ilo dakhli badan?
Awooddaada kasbasho ma isbadali doontaa gabi ahaanba?
Sida laga soo xigtay Juststartinvesting.com, si garqaadaha geo uu noqdo run ahaantii guulaystay, waa inaad ilaalisaa ama xitaa kordhisaa dakhligaaga markaad guureyso. Ugu yaraan, waxaad u baahan tahay inaad fahanto waxa aad filanayso iyo tallaabadaada xigta haddii ay wax u dhici waayaan sidii loogu talagalay.
Markaad miisaaniyaddaada u dhisayso goobtaada cusub, waxaad isbarbar dhigi kartaa qiimaha tusaha nolosha iyo Qoyska Maraykanka ee caadiga ah adigoo isticmaalaya xisaabiyaha kharashka. Xisaabintaani waxay kaa caawin doontaa inaad hesho qiyaasta “FI Number”, yacnii qaddarka aad u baahan tahay inaad geliso si aad u taageerto qiimaha noloshaada.
XIDHIIDHKA: Sida Looga Hawlgaliyo 50 -ka Milyaneer ahaan! Riyooyinka Hawlgabka
Qiimaha maciishadda waxaa loo qaybin karaa qaybo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan kuwa soo socda:
Ka tagista meel cashuuruhu ka saaran yihiin meel sare oo ay ku bixiyaan canshuuro badan ama lacag la mid ah wax macno ah ma laha. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso canshuur -celinta meesha aad soo jeedisay ka hor intaadan guurin.
Hal dariiqo oo fudud oo lagu yarayn karo canshuurahaaga, iyo qiimaha noloshaada, waa inaad u guurto meel aan lahayn canshuur dakhli dawladeed.
La yaab malahan in Qiimaha guryaha iyo hantidu way ku kala duwan yihiin gobol kasta, magaalo iyo xaafad kasta.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad ku noolaato wadnaha San Francisco, aqal dhexdhexaad ah wuxuu ku kici karaa in ka badan $ 1.4 milyan! Sida laga soo xigtay Zillow, taasi waa qiimaha guriga dhexe ee magaaladan qaaliga ah. Isbarbar dhig taas Cleveland, halkaas oo qiimaha guriga dhexe uu yahay kaliya $ 66,000. Maxay kula tahay?
Marka, qodobka halkan ayaa ah inaad isbarbar dhigto qiimaha guryaha ka hor intaadan go'aan qaadan.
Tani waa mid ka mid ah waxyaabaha la tixgeliyo sidoo kale. Waxaa laga yaabaa inaan dhab ahaan lagu hagaajin qiimaha halkan laakiin fududeynta helitaanka.
Waxaad u baahan tahay inaad ogaato haddii laga yaabo inaad socod dheer ku qaadato saldhigga tareenka ama haddii aad si sahal ah uga heli karto taksi meel u dhow.
Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad ogaato inaad u baahan tahay baaskiil ama baabuur.
Hadday haa tahay, markaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato saamaynta kharashka iyo kharashyada kale ee labaad sida; caymiska, gaaska, dayactirka, iyo nidaamka baarkinka.
Waxyaabaha sida cuntada, dharka, safarada salon, madadaalada nooc kasta ha ahaadee waxaa loo kala saari karaa baahiyaha maalinlaha ah ee laga yaabo inaadan noolaan karin la'aantiis.
Sidaa darteed, ka hor intaanad ka fiirsan u -doodid juquraafi, waxaad u baahan tahay inaad yeelato aragti ku saabsan ka -qaybgalka. Tusaale ahaan, Miami dhexdeeda, waxaa laga yaabaa inay kugu kacdo $ 1.29 si aad u qabato dhalo biir ah oo ku taal baarka iyo $ 5.20 New York si aad u hesho isla beertaas.
Yacni, qiimaha badeecadaha iyo adeegyadu waxay ku kala duwan yihiin hadba meesha.
Haddii aad leedahay carruur qorshaynaysa ku noqo dugsiga ama aad rabto inaad iska diiwaangeliso barnaamij dugsi, waxaad u baahan tahay inaad ogaato ku lug lahaanshaha maaliyadeed oo aad is barbardhig toos ah samayso.
XIDHIIDHKA: 10-ka Jasiiradood ee ugu Fiican Adduunka ee laga fariisto 2022
Marka laga reebo qiimaha waxbarashada, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad miisaamid tayada xarumaha waxbarasho ee magaalada ama waddanka aad damacsan tahay inaad u guurto.
Tani waxay la xiriirtaa muuqaalka goobta la soo jeediyay iyo hab nololeed dadka deggan.
Tusaale ahaan, qof jecel buuraha ayaa laga yaabaa inuu jeclaado Montana halka qof u diyaargaroobaya waqtiyada xeebaha ah uu had iyo jeer dooran doono Florida.
Isku soo wada duuboo, waa inaad tixgelisaa tayada nolol maalmeedkaaga iyo meesha aad rabto inaad joogto markaad dooranayso. Oo ay la socdaan dhammaan macluumaadka qiimaha-nololeed ee sare.
Iyada oo leh aqoonta aasaasiga ah ee waxyaalaha la tixgeliyo ka hor intaadan go'aan gaarin, halkan waxaa ah tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee aad u baahan tahay inaad qaaddo si aad u fuliso hanti -dhowrka guuleysta.
Ka dib marka ay tahay inaad samaysay cilmi -baadhistaada oo ku salaysan qodobbada kor ku xusan, waxa ku habboon ee ku habboon inaad samayso waa inaad doorato meel ku habboon rabitaankaaga xagga faa'iidooyinka maaliyadeed iyo hab -nololeedka.
Iyada oo la raacayo natiijooyinkaaga, waxaad u baahan tahay inaad samayso xoogaa qorsheyaal maaliyadeed. Waan hubaa inaad ogtahay in laga yaabo inaad marka hore u baahdo kharash badan. Sidoo kale, hel qiimaha maciishadda.
Ka dib marka ay tahay inaad samaysay tillaabooyinka kore, tallaabada xigta ee habboon ee aad qaadi karto waa inaad soo guurto oo aad sahamiso. Haddii aad awoodid inaad booqato, taasi waxay noqon doontaa mid la yaab leh
Hadafka juquraafiyada ayaa ah in la joogteeyo dakhli heer sare ah (oo ay ku jiraan dakhliga hawlgabka) sida ugu fiican ee aad awoodid, iyadoo isla mar la dhimayo kharashyada. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah inaad samayso baaritaanka asalka ka hor intaadan go'aansan meesha aad u guureyso.
Waa maxay Wakaaladda Temp: Sidee bay u shaqaysaa Wakaaladda Temp
Intee lacag ayaad u baahan tahay hawlgabka?
Markaa, waxaad samaynaysaa qorshayaashaada hawlgabka oo waxaad la yaaban tahay inta lacag ee aad u baahan tahay hawlgabka. Waa kan…
Waxa jirta hadal run ah odhaahdan caanka ah - Hawlgabku waa wakhtiga kaliya ee noloshaada marka uu wakhtigu…
Akoonka IRA vs Brokerage: Waa maxay faraqa u dhexeeya?
Haddii aad ku cusub tahay maalgashiga, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad is barbar dhigto xisaabaadka dilaaliinta iyo xisaabaadka IRA si aad u go'aansato halka…
Dunidu waxay leedahay arrimo. Arrimaha aan la inkiri karin. Xog -uruurinta Xog -hayaha Ganacsiga 5tii sano ee la soo dhaafay waxay…
Per Stirpes vs Per Capita: Farqiga, Waxyaabaha La Midka ah, Sida ay U Shaqeyso
Quruxda lacag samayntu kuma dhamaato oo kaliya xisaabaadka bangiyada buuran iyo hantida buuxdhaaftay - waxaa jira...